Shooladaha jaban, keebaa la iibsanayaa 2022? Kuleyl lacag yar
radiyeeriyeyaasha isticmaalka hooseeya
Qaboojiyaha la qaadi karo oo leh bamka kulaylka
Foornadu waa aalado u adeega si kor loogu qaado heerkulka qolka aan dhigno. Waxay naga caawinaysaa inaan diirimaad ku jirno wakhtiyada ugu qabow. Waxaa jira noocyo badan oo shooladaha ku xiran nooca shidaalka in aan isticmaalno si aan kor ugu qaadno heerkulka.
Qormadan waxa aynu ku lafaguri doonaa dhammaan noocyada shooladaha jira iyo mid walba faa’iidada iyo khasaaraha uu leeyahay. Intaa waxaa dheer, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato qiimaha iyo helitaanka dhammaan kuwa tayo badan iyo qiimo wanaagsan leh.
Shooladaha ugu raqiisan ee lagu kululeeyo gurigaaga xilliga qaboobaha
Halkan waxaa ah xulashada shooladaha ugu fiican si looga fogaado qabowga xilliga jiilaalka. Mid kasta oo ka mid ah moodooyinkan waxaad ku guuleysan doontaa maadaama ay door bidaan isticmaalayaasha oo ay yihiin kuwa ugu qiimaha wanaagsan ee lacagta:
Orbegozo BP 5007 -... Eeg astaamaha 962 Fikradaha Eeg heshiiska
Orbegozo BP 0102 - Foornada ... Eeg astaamaha 253 Fikradaha Eeg heshiiska
Orbegozo BB 5000 - foornada ... Eeg astaamaha 432 Fikradaha Eeg heshiiska
MUULO LUQAD MADOW... Eeg astaamaha 5 Fikradaha Eeg heshiiska
Foornada foornada 14 kW ... Eeg astaamaha 3 Fikradaha Eeg heshiiska
AVANT AV7554 - Foornada ... Eeg astaamaha 145 Fikradaha Eeg heshiiska
Ugu fiican	Orbegozo BP 5007 -...
Tayada qiimaha	Orbegozo BP 0102 - Foornada ...
Waxaan jecel nahay	Orbegozo BB 5000 - foornada ...
MUULO LUQAD MADOW...
Foornada foornada 14 kW ...
AVANT AV7554 - Foornada ...
ka shooladaha pellet Waxay ku sii fidayeen sannadihii la soo dhaafay waxqabadkooda wanaagsan iyo hufnaantooda awgeed. Hawlgalkeedu waa mid fudud oo aan qaali ahayn. Foornada waxay leedahay haan lagu kaydiyo shidaalka, kiiskan, pellet. Markii aanu qalabka shaqaynay maroojin ayaa ku riixeysa pelletka qolka gubashada in dabka lagu shido heerka uu nidaamka xakamaynta elektaroonigga ah tilmaamayo.
Pellets ayaa gubanaya, soo baxaya kulaylka iyo qiiqa laga soo mariyo dabada dambe ee qiiqa bannaanka ay ku xiran tahay.
Haddii aad rabto inaad haysato shooladda pellet, ka faa'iidayso wax-soo-saarkayaga.
Fiiri shooladaha pellet
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ay bixiso ayaa ah awoodda barnaamijka waqtiyada kaas oo shooladda la shido si ay u siiso kulaylka qolka oo haddana damiso. Shooladahani waxay aad ugu wareersan yihiin shooladaha biomass-ka ah, maadaama uu pellet-ku yahay nooc ka mid ah shidaalka noole. Waxay ka kooban tahay balka la isku ururiyey oo qaab dhululubo yaryar ah. Guud ahaan, laba kiiloogaraam oo pellets ah ayaa bixiya kulayl isku mid ah oo ay dhaliso hal litir oo naafto ah.
Waa shooladaha ugu jaban ee maanta la heli karo. Shidaalkeedu waa baayomaska ​​laga helo kaymaha. Waxay ku salaysan yihiin shooladaha alwaax dhaqameed ee nolosha, laakiin codsanaya tignoolajiyada ugu horumarsan. Tani waxay ka dhigaysaa isticmaalkeeda mid raaxo leh oo gubanayana waa la hagaajiyay.
Maadaama shidaalkoodu uu yahay gebi ahaan deegaan iyo dabiici, waxyeello yar ayey u leeyihiin deegaanka. Waxay ku fiican yihiin inay ka faa'iidaystaan ​​kulaylka ugu dabiiciga ah iyo kuwa saafiga ah.
ka shooladaha qoryaha waa kuwa ugu dhaqanka badan. Kuwani waa aaladaha u isticmaala qoryaha sida shidaalka. Xabada waxaa laga helaa geedaha. Isticmaalkeeda maalinlaha ah ee ugu badan waxay ku dhacdaa jikada meelaha miyiga ah, inkastoo ay sidoo kale u adeegto si ay u siiso kulayl iyo kordhinta heerkulka qolka.
Sida caadiga ah, dhammaan shooladaha alwaaxdu waxay leeyihiin tuubo ku dhammaata qiiqa ka soo saarta gaaska ka soo baxa gubashada oo ka caawisa yaraynta khatarta neefsashada hawada wasakhaysan.
Waxay yihiin shooladaha ugu fudud ee la isticmaalo oo bixiya nasasho badan sababtoo ah deegaanka dheeraadka ah ee guriga ee uu ololku bixiyo. Waxay qaadan kartaa ilaa afar saacadood in uu ololku gubo, laakiin waxay si fiican u ilaalin kartaa kulaylka ilaa 20 saacadood. Foornada alwaaxdu waxay gubanaysaa qiyaastii 9 saacadood waxay siinaysaa kulayl ku filan habeenkii oo dhan.
Ma rabtaa inaad iibsato shoolad alwaax ah? Halkan waxaad ka heli doontaa qiimo jaban.
Fiiri shooladaha alwaaxda lagu shido
Qoryaha la isticmaalo waa in uu lahaadaa heer yar oo qoyaan ah haddii aad rabto in uu sii shido muddo dheer. Inta uu alwaaxdu sii qallajiso, si dhakhso ah ayuu u gubtaa.
Waxa kale oo jira shooladaha alwaax leh oo foorno leh si ay uga faa'iidaystaan ​​kulaylka ka dhasha oo loo kariyo qaar ka mid ah cuntooyinka sida rootiga, pizzas, qaar ka mid ah skewers iyo dubay.
Naqshadeynta shooladaha gaaska waxay u ogolaataa waxtar weyn. Shidaalka loo adeegsaday munaasabadan waa gaaska butane. Waxay u muuqdaan inay leeyihiin waxqabad aad u fiican. Waagii hore, dadku waxay ka cabsanayeen inay iibsadaan oo isticmaalaan gaaska dabiiciga ah ama silsiladaha gaasta butane.
Si kastaba ha ahaatee, wakhtigan xaadirka ah, noocyadan shooladaha aad bay ammaan u yihiin. Intaa waxaa dheer, waxay awood u leeyihiin inay abuuraan kayd dheeraad ah bishiiba waxaanan isticmaali karnaa wakhti kasta oo degdeg ah.
Shooladaha gaaska ayaa u taagan inay aad u jaban yihiin. Haddii aad rabto inaad ka faa'iidaysato qiimaha ugu fiican, ha seegin wax-soo-saarkayaga.
Eeg shooladaha gaaska
Hawlgalkeedu waa mid aad u fudud. Waxay leedahay fareem ah halka la dhigo dhululubada gaaska butane oo gubiyuhu uu mas'uul ka yahay ilaalinta gubashada firfircoon. Inta lagu jiro hawsha, gaasta butane waxaa lagu gubaa ogsijiinta hawada ku jirta waxayna bixisaa kulayl qolka.
Shooladahaas waxaa si fudud looga guuri karaa meel loona guuri karaa meel kale marka la rabo (ilaa inta ay dansan yihiin). Waxay ku habboon yihiin kululaynta qolalka yaryar, maadaama ay si dhakhso ah u sameyso.
Noocyada noocaan ah ee shooladaha si fiican looma yaqaan, laakiin aad bay waxtar u leeyihiin. Waa nidaam la qaadi karo oo aan u baahnayn nooc kasta oo ku rakibid iyo/ama dayactirid. Shidaalkiisu waa dareere (paraffin) gubashadiisuna aad bay u aamusan tahay.
Faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah fududaynta in laga soo raro qol ilaa qol kale iyo xawaaraheeda kuleylka. Intaa waxaa dheer, kulaylka ay soo saarto shooladaha paraffin maaha sida kuleyliyaha korantada oo kale, halkii ay si ka sii wanaagsan ugu fidi lahayd qolka. Tani waxay ka dhigaysaa dareenka raaxada inay bixiso wax aad u weyn.
Isticmaalayaal badan ayaa doorbida shooladaha paraffin ama kerosene sababtoo ah qiimahooda iyo badbaadadooda oo sarreeya. Haddii aad rabto inaad iibsato shooladda paraffin, ka faa'iidayso wax-soo-saarkayaga.
Fiiri shooladaha paraffin
Marka la barbar dhigo isticmaalka shooladaha kale, shooladda paraffin waxay leedahay isticmaal aad u hooseeya.
ka Foornooyinka korontada Waa aalado u isticmaala koronto si ay u kululeeyaan caabbinta una kordhiyaan heerkulka deegaanka. Waxay bixiyaan kulaylka ugu nadiifsan uguna nadiifsan, maadaama aysan dhalin nooc kasta oo qiiq ah. Mid ka mid ah cilladaha ayaa ah kororka biilka korontada.
Isticmaalka shooladaha korontada ku shaqeeya ayaa ku dhow mid baahsan waxayna aad ugu raaxaystaan ​​in laga soo qaado qol ilaa qol kale iyo xitaa haddii aad safar gasho. Si kastaba ha ahaatee, kuma fiicna xagga kaydka, maadaama ay aad u kordhiyaan biilka korontada haddii si joogto ah loo isticmaalo.
Shooladaha korantada had iyo jeer waa wax fiican in qolalka lagu kululeeyo waqtigii loogu talagalay. Way jaban yihiin oo miisaankoodu yar yahay, markaa waxay ku habboon yihiin isticmaalka marmarka qaarkood.
Fiiri shooladaha korontada ku shaqeeya
Way ku fiican yihiin haddii aad rabto inaad diirada saarto kulaylka hal ama laba qol oo uma baahnid kulaylka si uu ugu faafo dhammaan qolalka guriga.
Kala duwanaanshaha lagu xisaabtamayo markaad dooranayso shooladda
Si aad u doorato hal nooc ama mid kale, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo dhowr arrimood:
Midda koowaad waa awoodda shooladda si ay u soo saarto kulaylka qiimaha ugu yar. Guud ahaan, mar kasta oo ay koronto leedahay shooladda, waxaa sii badanaya shidaalka uu u baahan yahay ama korontada ay isticmaalayso (haddii ay tahay shooladda korontada).
Si aan u ogaano awoodda calorific ee ku filan ee shooladdayada, waa inaan ogaanaa guud ahaan guriga oo dhan. Awoodda waxaa lagu qiyaasaa kW. Awood kasta oo kW ah waxay awood u leedahay in ay kuleysato 8 mitir oo laba jibbaaran Oogada. Sidaa darteed, haddii gurigaagu yahay 80 mitir oo laba jibbaaran, awoodda 10 kW ayaa ku filan.
Si aad u ogaato shooladda ugu fiican xaaladdaada, aad bay muhiim u tahay in la ogaado qolka sida ugu badan loo isticmaali doono ama meesha lagu rakibayo. Haddii qolka weyni yahay 30 mitir oo laba jibbaaran, waa in aan isticmaalno awood ka sarreysa haddii ay tahay 20 mitir oo laba jibbaaran. Si loo hagaajiyo isticmaalka shooladda, waxaa habboon in la isticmaalo xogta tixraaca ee kW ee kor ku xusan.
Goobta shooladda ayaa ah qodobka go'aamiya waxqabadka. Haddii qolka aan ku rakibeyno ama dhigeyno uu yahay kan ugu diiran, waa inaan isticmaalnaa waqti yar. Taas beddelkeeda, haddii ay tahay kan ugu qabow, waa in aan hagaajinno qolka si loo yareeyo isticmaalka shooladda.
Si aad u sii kordhiso waxtarka shooladda, isku day inaad doorato meel ka mid ah qayb ka mid ah qolka oo leh dahaar gaar ah oo wanaagsan, si kulaylka ka soo baxa shooladda uusan u lumin derbiyada ama daaqadaha. Waa muhiim inaad ka tagto meel 40 sentimitir u jirta inta u dhaxaysa gidaarka iyo shooladda ama shay kasta oo gubanaya si looga fogaado dab suurtagal ah.
Aad bay lagama maarmaan u tahay in qolka aan ku ridno shooladda uu leeyahay hawo-qaadid iyo habka qiiqa ka saarista si looga fogaado kuleyl badan ama khatar kasta oo dab ah.
Daaqadaha iyo dahaarka
Haddii gurigu leeyahay dahaar wanaagsan iyo daaqado laba-glazed ah, shooladda ayaa si fiican u shaqayn doonta. Ha iloobin inaad baxdo fogaan ah oo ku saabsan 30-40 cm inta u dhaxaysa shooladda iyo shay kasta oo gubi kara.
Sida loo doorto shooladda
Marka dhammaan doorsoomayaasha lagu xisaabtamayo la ogaado, waxaan dooran karnaa shooladda noogu habboon.
Shooladaha alwaaxdu waa kuwa bixiya kulaylka ugu sarreeya iyo gubasho nadiif ah. Waxay ku socon karaan shidaal la cusboonaysiin karo sida xaabada goosashada. Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin qodobka qurxinta ee ololku na siinayo. Waxay awood u leedahay inay na siiso jawiga guriga ee aan raadineyno. Waxaa jira noocyo badan oo la jaan qaada qurxinta aan aadka u jecelnahay. Faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah aad ugu baahan wax shaqo ah. Waxay u baahan yihiin oo kaliya in ay ku xidhaan dibadda meesha qiiqa laga soo baxo.
Dhanka kale, shooladaha lagu dhisay birta iyo walxaha dib-u-celinta ayaa loo diyaariyey inay kuleyliyaan meelo ka weyn qoryaha.
Haddii aad rabto kulayl dhaqsiyaha badan laakiin ka yar, dooro shoolad ka samaysan walxo bir ah. Haddii aad rabto kulayl xoog badan oo waara, laakiin marka hore ka gaabiya, Dooro qoryo, biomass ama shooladaha pellet.
Noocyada Foosto ee ugu Fiican
Nooc kasta oo qoryo ah waxaa jira noocyo bixiya waxqabad wanaagsan iyo shooladaha waxtarka leh.
Shooladaha alwaaxyada waxaan ka heleynaa calaamado hogaaminaya sida Rocal, Carbel, Hergom iyo Bronpi.
Shooladaha Pellet waxay leeyihiin noocyo caan ah sida Lacunza, Ecoforest, Bronpi iyo Edilkamin.
Sida shooladaha gaaska waxaan ka helnaa noocyo awood leh sida DeLonghi iyo Orbegozo.
Shooladaha paraffin waxaan ku haynaa sumado leh tayo wanaagsan/qiimo wanaagsan sida Qlima, Webber iyo Kayami.
Shooladaha korontada ayaa leh noocyo badan oo kala duwan, maadaama ay yihiin kuwo ganacsiyo badan leh. Waxaan helnaa noocyada ugu fiican sida Orbegozo, Clatronic, Rowenta, Klarstein, Thermic Dinamics, DeLonghi iyo Taurus.
Macluumaadkan waxaad dooran kartaa shooladda ugu fiican xaaladdaada oo waxaad badbaadin kartaa inta ugu badan ee suurtogalka ah kulaylka adigoo ku raaxaysanaya dhammaan faa'iidooyinka.
1 Shooladaha ugu raqiisan ee lagu kululeeyo gurigaaga xilliga qaboobaha
2 Noocyada shooladaha
2.1 Qaboojiyaha la qaadi karo oo leh bamka kulaylka
2.2 Kuleyliyaha dhoobada
2.3 radiyeeriyeyaasha isticmaalka hooseeya
2.4 Hilibka saliidda
2.5 Foornooyinka qoryaha
2.6 Foornooyinka bioethanol
2.7 Shooladaha jajabka
2.8 Foornooyinka qoryaha
2.9 Foornooyinka gaaska
2.10 Shooladda paraffin
2.11 Foornooyinka korontada
3 Kala duwanaanshaha lagu xisaabtamayo markaad dooranayso shooladda
3.1 Awood kuleyliyaha
3.2 Cabbirka qolka
3.5 Daaqadaha iyo dahaarka
4 Sida loo doorto shooladda
5 Noocyada Foosto ee ugu Fiican
Baraffin iyo shooladaha kerosene
Pellet iyo biomass shooladaha
Jimcaha Black Friday heerkulbeegyada WiFi
Cyber ​​​​Monday heerkulbeegyada WiFi
Shooladaha jaban 2022 - Siyaasadda Asturnaanta - Macluumaadka ku saabsan buskudka